Fiarovan-tseza aloha izao no mahamaika | NewsMada
Fiarovan-tseza aloha izao no mahamaika
Fandrirarirana, ampitso ampitso lava, politika sy paikady tsy misy na tsy azo antoka… Izany no afitsoky ny mpitondra manoloana ny asa fampihorohoroana amin’izao? Herinandro izao, mihodinkodina fotsiny ny mpitondra isan-tsehatra sy isan’ambaratonga ny amin’ny fisian’ny tampajotran’ny mpampihorohoro eto Madagasikara, raha ny nambaran’ny ambasadaoron’i Torkia, ny 29 jolay lasa teo.
Tsy misy afa-miala amin’ny asa fampihorohoroana ny firenena eran-tany, ary ao anatin’izany i Madagasikara. Samy miventy izany, ohatra, na ny Praiminisitra na ny minisitry ny Fiarovam-pirenena. Vitan’izany ny raharaha? Eo koa ny hoe efa mandeha ny fanadihadiana, tsy mora io. Tena sahy miatrika asa fampihorohoroana ve ny fitondram-panjakana malagasy? Indrindra ny mpitandro filaminana…
Tsy lavina, tsy mila ampahafantarina ny besinimaro avokoa ny tetikady rehetra, saingy afa-manome antoka amin’ny hoe fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ve ny mpitandro filaminana? Hatreto, raha ny hita sy ny iainan’ny vahoaka: mbola ny fiarovana ny mpitondra sy ny vahiny no zava-dehibe sy mahamaika ny mpitandro filaminana. Fanamarinan-tena sy fiarovan-tseza hatrany no afitsoka.
Ahoana, ohatra, ny fiatrehan’ny mpitondra sy ny mpitandro filaminana ireo mpampihorohoro eto an-toerana? Eo ireo asan-dahalo izay fanaovana izay hahalao monina ny vahoaka ifotony. Misy milaza fa mba hahazoana mitavana ny harena an-kibon’ny tany no antony. Marina ve izany? Na ny fitrandrahana harena an-kibon’ny hoe ara-dalàna aza, tsy mavaza be ihany: vao mainka ny zava-tsy mazava toy izany…
Amin’ny lafiny iray, toa ny mpitondra sy mpitandro filaminana aza no hitan’ny olom-pirenena tsotra maro ho mpampihorohoro amin’izao. Tsy inona fa ny fandrahonana sy fanapoahana baomba mandatsa-dranomaso amin’izay mitady hihetsika na midina an-dalambe rehetra, na fonja ho an’ireo mpitarika hetsika toy ny sendikà, mpianatra… Ahoana ny hiatrehana asa fampihorohoroana avy any ivelany amin’izany?